४ वटै हात खुट्टा नभएका ११ बर्षिय भाइ, सबै काम आफै गर्छन तर हात छैन भन्दै धरधरी रोए, सबैलाई रुवाउने भिडियो – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Video/४ वटै हात खुट्टा नभएका ११ बर्षिय भाइ, सबै काम आफै गर्छन तर हात छैन भन्दै धरधरी रोए, सबैलाई रुवाउने भिडियो
नुवाकोट । बिचरा ११ बर्षको उमेरमा एउटा सानो बच्चाले के गर्न सक्ला ? के खोज्ला ? र बाबुआमाबाट के आश गर्ला ? भन्नु त । हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो माया, साथ र खेल्न चाहन्छ तर यि बाबुको भाग्यमा यस्तो लेखिएको रैनछ ।
केबल जिन्दगीभर रुन लेखेको रैछ भन्दै आफनो यो अवस्थालाई दैबको दोश पनि लगाउछन यिनका बुवा नुवाकोट शिबपुरी — २ छाप निबासी राजु तामाङ । मध्यमस्तरीय परिबारमा यस्तो अवस्थामा जन्मनु पनि मेरो छोराको लागि अभिशापनै बन्यो भन्दै बाबु रुन सुरु गर्छन । तिन सन्तानका बुवा राजुका यि ११ बर्षिय सन्तान एनिक तामाङ कान्छो सन्तान हुन ।
आमा दिनभरि ज्याला मजदुरी गर्छिन भने बुवा भुपु नेपाली सेना पनि हुन र उनले सानो होटल तथा ब्यवसाय गरेर ज्यान पाल्ने बाटोको जोहो गरिरहेका छन । ११ बर्षिय एनिक जन्म जातनै यस्तै हुन, उनका दुबै हात र खुट्टा छैनन तर पनि पढन, लेख्न, मोबाइल चलाउन, हिडडुल गर्न र खाना खान आफै मज्जाले सक्छन तर टवाइलेटको लागि भने समस्या रहेको बुवा राजु बताउछन ।
कक्षा १ मा पढने एनिक जब स्कूल जादा साथीहरुले तेरो हात छैन भनेर गिज्याउदा आफूलाई एकदमै रुन मन लाग्ने भन्दै यसरी धरधरी रुन्छन, हेर्नुस त १ सेयर गरेर सहयोग पनि गर्दनुहोला —